Fifanosehana tamin’ny « Kopi Kolé » : telo lahy maty, 16 naratra tany Toliara | NewsMada
Fifanosehana tamin’ny « Kopi Kolé » : telo lahy maty, 16 naratra tany Toliara
Nitrangana fifanosehana ka nahafatesana telo lahy sy nandratra olona 16, nandritra ny fiafaran’ny lanonam-pamaranana ny “Kopi Kolé” sy ny fanamarihana faha-5 taon’ny fahitalavitra TV Plus Toliara, ny zoma alina teo, tany Toliara.
Araka ny vaovao voaray, 10 minitra taorian’ny firavan’ny fety, nitrangana fifanosehana teo amin’ny vavahadin’ny fivoahana ny kianja mitafo ao Tsienengea. Naratra mafy voahitsakitsaka ny olona maromaro anisan’ny tonga nijery ity lanonana ity. Voalaza fa tsy tana intsony ny ain’ny telo tamin’ireo rehefa tonga teny amin’ny hopitaly. 16 ireo naratra, ka ny valo efa afaka namonjy fodiana. Mbola manaraka fitsaboana ny ambiny.
Nilaza kosa anefa ny ny depiote Randrianasoloniaiko Siteny, tompon’andraikitra voalohany ny TV Plus Toliara, fa fanakorontanana ity niseho ity. Ahiana ho resaka fanakorontanana sy vono olona niniana natao no nitranga, raha ny vaovao voaray, satria nahitana tsindrona zava-maranitra maromaro teo amin’ny vatan’ny iray amin’ireo telo lahy namoy ny ainy tany amin’ny hopitaly. Fantatra fa nahitana tsindrona zava-maranitra telo, teo amin’ny sandrin’ilay iray.
“Nisy andian-jatovo ninia nanakorontana ny lanonana ka nampiasa “big boss” mihitsy. Sompatra nataon’ireo tsy mataho-tody izao mba hanosoram-potaka ny TV Plus, satria tia mifety Toliara “, hoy ny depiote Randrianasoloniaiko Siteny, tompon’andraikitra voalohany TV Plus Toliara.
Manoloana ity voina ity, mangataka fanadihadiana manokana hahafantarana ny tena zava-nisy marina ny fianakavian’ireo maty havana. Nisy, araka izany, ny fametrahana fitarainana eny anivon’ny mpitandro filaminana, ary misokatra ny fanadihadiana. Ny mpitandro filaminana rahateo, efa teny an-toerana nandamina ny korontana io zoma alina io. Tsy nisy aloha ny fisamborana fa niverina tamin’ny laoniny ny filaminana tany Toliara. Fantatra fa efa nandray andraikitra ny fitsaboana sy ny momba ireo namoy ny ainy ny tompon’andraikitra amin’ny TV Plus Toliara. Nitsapa alahelo ireo tompo manjo ny fianakaviamben’ny TV Plus.
Araka ny efa nambaran’ny depiote Randrianasoloniaiko Siteny, tia mifety ny olona any Toliara, ary tanàna mafana. Antony mahasarika olona maro rehefa misy ny lanonana na zava-mitranga any an-toerana. Efa nisehoana tranga mitovitovy amin’izao tany Toliara, ny 5 may 2013, nandritra ny fankalazana ny faha herintaonan’ny TV Plus Toliara, izay nahafatesana olona telo ihany koa, nianjeran’ny lampihazo. Mafampana, araka izany, ny mponina rehefa vory lanona. Toe-javatra mety mitranga ny toa ity niseho ny zoma lasa teo ity, rehefa tsy voafehy ireo vahoaka marobe. Ny depiote rahateo nilaza ny amin’ny fisian’ny mpanakorontana. Andrasana ny vokatry ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana ahafantarana ny tena marina. Tsy maintsy misy ny fanazavana ofisialy sy ny fisamborana raha tena marina ny momba ireo mpanakorontana ireo satria nisy ny fatiolona.
Une réponse à "Fifanosehana tamin’ny « Kopi Kolé » : telo lahy maty, 16 naratra tany Toliara"
Rakotoarisoa Maminiaina N 08/05/2017 à 10:01
Slm,”efa nisy tranga tahaka an’io t@fankalazana ny faha herintaonan’ny TVPLUS”,tokony atao entitra tsara ny fitandroana ny filaminana rehefa misy hetsika tahaka ireny.Aina nge no afohy e!!! R@ taona manarak firy ndray ny ho faty sy haratra???!!!!Mirary soa tompoko